Zingaxhamla njani iiNtengiso zeMidlalo engeyiyo yeMidlalo ngokuSebenza nabaPhembeleli beMidlalo | Martech Zone
Abaphembeleli bemidlalo baya kuba nzima ukungahoyi, kwaneempawu ezingezizo ezokudlala. Oko kunokuvakala kungaqhelekanga, ke masichaze ukuba kutheni.
Amashishini amaninzi ahlupheke ngenxa yeCovid, kodwa umdlalo wevidiyo waqhuma. Ixabiso layo liqikelelwa idlula kwi-200 yezigidigidi ngonyaka ngo-2023, ukukhula kunikwa amandla liqikelelo Iibhiliyoni ezi-2.9 zabadlala umdlalo kwihlabathi liphela kwi 2021.
Ingxelo yeMakethi yeHlabathi yeMidlalo
Ayisiwo amanani kuphela anomdla kwiimveliso ezingezizo ezokudlala, kodwa inkqubo eyahlukeneyo yendalo ejikeleze umdlalo. Ukwahluka kudala amathuba okubonisa uphawu lwakho ngeendlela ezahlukeneyo kunye nokufikelela kubaphulaphuli obukhe wakuzabalaza ukubandakanyeka nabo. Umdlalo wevidiyo usasazeka njengenye yemisebenzi yamaphupha abantwana, ngentengiso ehamba phambili kulindeleke ukufikelela kwizigidi ezingama-920.3 abantu kwi-2024. Ukunyuka kwee-esports kukwabalulekile; kulindeleke ukuba ifikelele million 577.2 abantu kwangalo nyaka.
Phantse ama-40% exabiso leendaba eliqhutywa ziimpawu ezingezizo zokudlala, ukuthengisa kubadlala umdlalo ayinakuphepheka. Uncedo lokuhamba kuqala lubalulekile ukuze ufunde kwaye uqonde intengiso yemidlalo phambi kwabakhuphisana nabo. Kodwa kuqala, kufuneka uqonde ngokuchanekileyo ukuba umdlalo udlala njani ngo-2021.
Ukuchazwa kwabaphulaphuli beMidlalo
Unokucinga ukuba umdlalo ulawulwa ngamakhwenkwe akwishumi elivisayo anexesha elingenasiphelo-kodwa oku akunakuba kude nenyaniso. I-83% yabasetyhini kunye ne-88% yamadoda inokuhlelwa njengabadlala umdlalo. Kwaye ngelixa kuyinyani ukuba umdlalo uthandwa kakhulu kubantu abancinci, i-71% yabaneminyaka engama-55-64 ubudala bayadlala nabo. Xa kuziwa kwindawo, umdlalo wehlabathi jikelele. I-45% yamaDanes ibanga ukuba idlala imidlalo ngokuchasene ne-82% yeThais, kodwa ezoqoqosho zibalaseleyo kwihlabathi ziyahambelana ukubandakanyeka ngamandla, ebaluleke kakhulu kubathengisi. Umdla kwimidlalo kunye nokukhetha kuyahluka ngokwamanqanaba obomi, ubuhlanga, kunye nokuzibandakanya kwezesondo.
Ngale nqanaba lokwahluka kwimidlalo, kucacile ukuba izithethe zesiko azibambeki. Kodwa oku kuyinceda njani uphawu lwakho olungadlaliyo? Kuthetha ukuba uya kuyifumana iimpembelelo zokudlala olungele indalo kuwe.
Ixabiso Leempembelelo zeMidlalo kwiiNtengiso zeMidlalo
Abaphembeleli bemidlalo yokudlala bayaliqonda ishishini kwaye-okona kubaluleke kakhulu-inkcubeko yemidlalo. Abaphulaphuli babo ngabalandeli abanzima, bazibandakanye kakhulu kwaye bagutyungelwe ngokufanayo kuzo zonke izinto zokudlala. Imidlalo yokudlala yidijithali; Abadlala umdlalo osebenzayo, abathengi bemithombo yeendaba. Iindlela zomkhankaso ezisebenzele wena ngokwesiko zisenokungasebenzi apha, ngakumbi ukuba awuzenzi. Yincoko ka Ukudibanisa okanye i-YouTube, kungekhona Umabonwakude okanye imidiya yoluntu. Ukubhengeza kwimidlalo kufuneka kuyenze inkcubeko yakho okanye ubaphelise abaphulaphuli bakho, kwaye abachaphazeli yindlela efanelekileyo yokukhuthaza uphawu lwakho.
Ukudibana nabashukumisi bemidlalo kukunika ukufikelela phi? Iindidi zabaphulaphuli ezinokungafunyanwa kwenye indawo- ngakumbi kwisikali esinye. Imijelo yeTwitch ihlala iyure iiyure, kunye nengxoxo yayo yokuncokola ebangela unxibelelwano rhoqo phakathi komjelo kunye nabaphulaphuli. Umdlalo we-YouTube udlulile 100 billion ixesha lokubukela ngo-2020, inani elingenakulinganiswa. Kodwa ayisiyiyo yonke into malunga nobukhulu.
Kukunyaniseka kwabaphembeleli bemidlalo ukuba bahlangane nabaphulaphuli babo, benze ubudlelwane obuxakeke kakhulu. NgoSeptemba 2020, imboni yezemidlalo yabona Ireyithi yokubandakanya ephezulu ye-9% ukusuka kwi-nano influencers (1,000-10,000). Iimpembelelo zeMega (isigidi esi-1 okanye ngaphezulu sabalandeli) babeneqondo lesibini eliphezulu kuma-5.24%, becebisa nabona bantu badumileyo kwezemidlalo bayakwazi ukuyala ingqalelo yabaphulaphuli babo. Umxholo wemidlalo uziva uyinyani ebantwini, kwaye izixhobo zendalo ezinje ngengxoxo yeTwitch ziyilelwe ukukhulisa oko.
Isebenza njani iBrand yakho kunye nabaPhembeleli beMidlalo
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokusebenzisana nabaphembeleli bezemidlalo. Apha ngezantsi kukho iindlela eziphambili esizicebisayo kwiimpawu ezingezizo zokudlala.
Umdibaniso oxhasiweyo -Ukukhankanywa kweBrand kukukhwaza okuqinisekileyo kwemveliso yakho okanye inkonzo edityaniswe kumxholo wempembelelo. I-Cloutboost iqhube iphulo leHotspot Shield VPN yokunyusa ulwazi lwentengiso kunye nokuqhuba ukhuphelo lweemveliso, ukuxhasa iimpembelelo zeTwitch. Inkxaso mali yeTwitch ibandakanya ukunxibelelana ngemizabalazo yobuqu imveliso isonjululwe, kunye nokuxoxa ngezibonelelo zemveliso ngokubanzi. Inkxaso-mali ibonakalise ukunikezelwa, ukubandakanywa kweHotspot Shield kwiibhena zentengiso kunye neelogo, kwaye kusetyenziswa umnxeba wengxoxo rhoqo kwizenzo.
Umncintiswano we-brand yeVPN, i-NordVPN, ijolise kakhulu kwintengiso yempembelelo-ikakhulu kwiYouTube. Uya kufumana uphawu lwayo kuwo wonke umdlalo, ukusuka kubadlali abancinci ukuya kwiPewDiePie. I-NordVPN igxininisa izibonelelo zexesha elide yeYouTube; abaphulaphuli baya kubukela ividiyo kwiinyanga okanye kwiminyaka ngaphambili njengoko iqonga lealgorithm kunye nomsebenzisi ujongano ungagxili ngokukodwa kulayisho olutsha. Xa kuthelekiswa, amaqonga anje ngeTwitch kunye ne-Instagram agxile kumxholo wangoku.
I-LG ibonisa omnye umzekelo wentengiso ejolise kubadlali. Inkampani inembali yokusebenzisana nemidlalo ye-YouTubers, icacisa indlela i-LG TV enokuba lukhetho olukhulu kubadlali bebhola. Imidlalo yeDaz yenze ifayile ye- Ividiyo exhaswa ngeLG ethi ivelise imveliso ngendlela yendalo, inika umzekelo obalaseleyo wendlela ezingezizo ezokudlala ezinokuthi zikhuphe ukudityaniswa okuyinyani kwaye zifikelele kubaphulaphuli abatsha.
Ukuphembelela ukupha -Iizipho zihlala ziyindlela elungileyo yokwenza ukubandakanyeka kujikeleze uphawu lwakho. I-KFC ibaleke indibaniselwano yokudlala kunye neTwitch streamers ukubonelela ababukeli ngokunikezela ngeentengiso zorhwebo kunye namakhadi ezipho xa bephumelele umdlalo. Abasebenzisi bangene ngokuchwetheza i-KFC emote (Iimpawu ezikhethekileyo zeTwitchKwincoko yeTwitch, kwaye amabhaso ayenzelwe ngokwesiqhelo ngokomdlalo owawudlalwa. Ukuvelisa imveliso yakho eyenzelwe umdlalo yeyona ndlela ilungileyo yokuyihlanganisa ngokwendalo.
Iziganeko zoMdlalo -I-Hershey inyuse esinye seziganeko ezinkulu zemidlalo, iTwitchCon 2018, ukuya khuthaza ibha yetshokholethi yabo entsha yeReese's Pieces. Ukusukela iTwitchCon yazisa umsinga omkhulu weqonga ndawonye phantsi kophahla olunye, u-Hershey waxhasa uNinja kunye noDrLupo ukuze basebenzisane. Olu sebenziso lwenziwe kwithuba elikhethekileyo lokufikelela kubasasazi ngokudibeneyo, ngentsebenziswano edlala umbono ka-Ninja kunye noDrLupo njenge-duo emangalisayo-njengoHershey kunye noReese.
Ukuba ucinga ukuba uphawu lwakho lususwe kude kwimidlalo, sukujonga ngaphezulu kwe-MAC cosmetics yokuphefumlelwa. I-MAC ixhase iTwitchCon ngo-2019, Ukuqhuba ukupha, ukubonelela ngeenkonzo zokufaka izicelo, kunye nokugaya ngempumelelo Imisinga yabasetyhini ezifana noPokimane ukudlala imidlalo kumnquba wabo. I-MAC SVP uPhilippe Pinatel ugxininise indlela iTwitch ekhuthaza ngayo ukuzimelela kunye nokuzichaza ekuhlaleni, amanqaku achaza i-MAC njengophawu.
IiSports -Iindawo zokundwendwela yindawo ethile yemidlalo yobuchule apho iimveliso zinokubandakanyeka khona. IAldi kunye neLidl basebenzisana nemibutho yezobugcisa Ukuxhasa iijezi kunye nokwenza umxholo ngokudibeneyo. I-Aldi kunye neQela leVithamini lihlanganyele ukukhuthaza umyalezo ophambili we-Aldi ngokubaluleka kokutya okunempilo, ukuyibophelela kuphando olusisigxina lokuSebenza.
Dibana kunye neeGreets -Njengemidlalo yokudlala, ukudibana kunye nokubulisa kubonelela ngendlela yokunyusa abachaphazeli bemidlalo ngaphandle kwehlabathi ledijithali. Umzekelo, jonga Ukudibana kwesigubungelo kunye nokubulisa eZumiez. Ukudibana nomntu ngaphakathi kunye nabadali bemidlalo yokuqala benza ixabiso elikhulu kwaye badibanisa uluntu oluzinikeleyo kunye.
Umzi mveliso wokudlala awuselilo iqela elikhethekileyo elalikade likho. Imidlalo yokudlala yeyamazwe aphesheya, kwaye imele umkhosi wabalandeli kuyo yonke iminyaka, isini kunye nobuhlanga. Ngelixa iimveliso zemidlalo zendele ngokungathandabuzekiyo kwintengiso yemidlalo, kukho ithuba elikhulu leemveliso ezingezizo zokudlala ukuze zenze imali kubaphulaphuli ababengafakwanga ngaphambili.
Abaphembeleli bemidlalo babonisa indlela yokuma yokufikelela kubaphulaphuli bemidlalo. Kukho iindlela ezahlukeneyo zokwenza ubuchule kunye nokuvelisa ulwazi ngebrand kunye nentengiso ejikeleze uphawu lwakho. Khumbula ukugcina engqondweni ukuba iidrama ngabathengi abaphucukileyo. Kubaluleke kakhulu ukuba imikhankaso yakho yokuphembelela yokudlala ilungiselelwe ishishini kunye neempembelelo ezithile ozikhethileyo.
tags: cloutboostdaz imidlalodlupoIindawoukufikelela kwabasetyhiniukuthengisa umdlaloumdlalo onempembelelointengiso yempembelelo kwimidlaloUmdibaniso wemidlalohersheynefutheKFClgumthombo philayoumdlalo ojikelezayoninjanordvpniingcongoloukuhlanganiswa okuxhasiweyoukudidekaukujija kwemisingatwitchconyoutubeImidlalo ye-YouTubezumies
UPolina Haryacha nguMsunguli e CloutBoost, eqhutywa yidatha, iarhente yokuthengisa egxile ekufumaneni edibanisa iimveliso kunye nabadlali abanomdla ofanayo. Ngaphezulu kweminyaka elishumi yamava kwintengiso yemveliso, ukufunyanwa komsebenzisi, kunye nohlalutyo lokuthengisa, uPolina yingcali eyaziwayo evezwe kwiTechCrunch, AdExchanger, Adweek, kunye namanye amajelo osasazo. Usisithethi kwiindibano eziphezulu zentengiso yedijithali, kubandakanya Ingqungquthela yedijithali kunye nePubCon, apho abelana khona ngobuchule bakhe bokumilisela nokukhulisa iselfowuni, iPC kunye nemidlalo yokuthuthuzela.
I-ActiveCampaign: Kutheni iTagging ibalulekile kwiBhlog yakho xa isiza kwi-RSS Email Integration